विवादमा तानिएपछि महामारीकै बीचमा स्वास्थ्य सचिवको सरुवा, अर्याल नयाँ सचिव – Health Post Nepal
विवादमा तानिएपछि महामारीकै बीचमा स्वास्थ्य सचिवको सरुवा, अर्याल नयाँ सचिव
२०७७ जेठ १५ गते १२:२५
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयमा सरुवा भएको छ । सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ सचिवमा लक्ष्मण अर्यालको सरुवा गरेको छ । तीन महिनाअघि मात्रै स्वास्थ्य सचिवका रूपमा आएका कोइराला पटकपटक विवादमा आएका थिए । उनले मन्त्रीसँग परामर्श नै नगरी सरुवा रोग विशेषज्ञ शेरबहादुर पुनलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि मन्त्रीसँग सम्बन्ध बिग्रिएको थियो ।
स्पष्टीकरण प्रकरणमा सरकार पछाडि हटिसकेपछि पनि उनले डा. पुनलाई करारको अस्थायी भन्दै सार्वजनिक रुपमै निकृष्ट गाली गरेका थिए । चिकित्सक संघले पनि यसको विरोध गरेको थियो ।
त्यसबाट विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई कोरोना औषधीको क्लिनिकल ट्रायल गर्न दिने निर्णय औषधी व्यवस्था विभागसँग परामर्श नै नगरी दिएका थिए ।
ओम्नीसँगको खरिद प्रकरणमा पनि सचिव कोइरालाले आर्थिक प्रशासनको परामर्शबिना नै खरिदको सम्झौता अगाडि बढाएपछि आलोचित बनेका थिए । त्यतिमात्रै होइन सार्वजनिक सञ्चार माध्यामा पनि राजनीतिक नेतृत्वले जसरी पूर्वमन्त्रीहरूको आलोचना गरेको विषय पनि विवादमा परेको थियो ।
प्रशासनिक रुूपमा चिकित्सकहरुसँग सुमधुर सम्बन्धन बन्न नसक्नु, जनशक्तिको व्यवस्थपन गर्ननसक्नु र मन्त्रालयबीचको समन्वयसमेत झनझन् बिग्रिँदै गएपछि मन्त्री नै कोइरालासँग असन्तुष्ट भएको उच्च स्वास्थ्य अधिकारी बताउँछन् ।
कोइराला महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा पनि पूर्व सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायसँग ट्वीटरमै गालीगलौजमा उत्रिएका थिए । मन्त्रालयका अधिकारीलाई समेत तँ भनेर सम्वोधन गर्ने गरेसँगै मन्त्रीकै उपस्थितिमा कोइराला र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकबीच झगडा नै भएको थियो ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिन सुरु गरेको केही दिनअघि मात्रै तत्कालीन सचिव डा. खगराज बराललाई सरुवा गरेर कोइरालालाई ल्याएको थियो । बराल पनि चिकित्सकसँग सम्बन्धन सुमधुर हुननसकेकै कारण मन्त्रालयबाट सरुवा हुन परेको थियो ।